iinkomo zokutya kweenkomo zepellet,Inkqubo yokwenziwa kweenkomo
Uhlobo lwamandla:umbane,injini yedizili
Umthamo:600~ 700kg / h
Ubungakanani bokugqibela beepellets:2~ 8mm
Isetyenziselwe:ukwenza ukutya kwenkukhu,ukutya kweenkomo,ukutya kwehagu,ipellet enotshani
Iimpahla ezingekasilwa:amazimba,umgquba,isidlo sangokuhlwa,alfalfa,irayisi husk,isidlo sengca,ubhekilanga,njl
Izinto zokufuma ezishushu kufuneka:12~ 15%
Yintoni iChickle feed Pellet?
I-pellet ye-cattle feed yindlela yokutya ye-pellet ese-in-one eyenziwe umatshini wokudambisa iinkomo ngexinzelelo olukhulu. Luhlobo lokutya olungapheleli nje kwinkomo, iinkomo, iinkomo kodwa kunye neegusha, kwaye bakhuliswa ngebhokhwe zobisi lwabo kunye nenyama. Ineproteni, iiminerali kunye nezinye izakhamzimba eziluncedo kwimveliso yenyama kunye nobisi kunye nokusinda kwezilwanyana.
Kutheni usenza iiPellets zoKondla zeKati?
Njengomzi mveliso weenkomo uphuhlisa ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo, ukutya kwendabuko akunakuhlangabezana neemfuno zesondlo. Amafama afuna ukufumana olunye uhlobo lwemveliso yokondla ekulula ukuyifumana, kulula ukuyigcina, ukondla izilwanyana kunye nexabiso elincinci. Akho ndlela yimbi? Zama iipellets zokutya kweenkomo. Iipellets zokutya zisempilweni kwaye zinempilo ngakumbi kunefidi yesiqhelo. Izinto eziluhlaza zepellets zokutya zinokuba yingca okanye intsalela yeenkozo ekulula kakhulu ukuzifumana, kwaye luhlobo oluhlaza kunye nesisombululo sokuphinda sisebenzise kwakhona kwezi ntsalela kwelinye icala. Ngaphandle koko, izithako kwiipellets zokutya zixutywe kakuhle, ke xa iinkomo zithatha ukutya, azisenako ukufaka ixabiso lokutya okuthile okanye isithako. Oku kuqinisekisa ukulinganisela kwesondlo. Unokwenza neendlela zokupheka inkukhu, yehagu, iinkomo, intlanzi okanye ezinye izilwanyana ngokwahlukeneyo, zixube kwaye uzenze zibe ziipellets, ukuze ufumane iipellets zokutya kuyo yonke inkukhu yakho kunye nemfuyo.
Izinto eziluhlaza zokwenza iipellets zokondla iinkomo
Iipellets zokutya kweenkomo zingalungiswa kwiikeyiki zeoyile, iintsalela zolimo ezifana nesithole seedhole, ingca, ingca yombona, ingca yengqolowa, amabele, ingqolowa, iimveliso zomgubo, iinkozo, mol mol, kwaye nangokunjalo.
Inkqubo yokwenza iiPellets zeeNkomo
Eyona misebenzi iphambili ibandakanyekayo ekuvelisweni kweepellets zokondla iinkomo zezi: Ukulungiswa kwezinto ezingafunekiyo, Ukutyunyuzwa kuqala, Ukunyibilika kwemoto, Ukutyhoboza kakuhle, Ukwenza ipellet kunye nokupakisha(ngokuzithandela)
Izinto eziluhlaza kunye nezixhasayo kuqala zibizelwa kwiisilco kunye neetanki apho zilungiselelwe ukuqhubekeka phambili. Ziye emva koko ziqwalaselwe yintloko ephambili. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ezonakalisiweyo zisahlulahlulwe kwakhona ngesihlungo, kwaye emva koko zigcinwe kwiiteksard assinging ngohlobo lwezixhobo eziluhlaza.
Izinto ezingafunekiyo zidityaniswa kusetyenziswa umxube wokutya. Kule nkqubo, izithako ezinamafutha zongezwa kwizixhobo ukuze kuphakanyiswe ixabiso lesondlo lesondlo. Ukutya okufunyenwe kumxube kuxutywe kunye ne-molasses.
★ Ukutya kwezilwanyana okuxelwe kwangaphambili okutyunyuzwe kumasuntswana amahle kwakhona kwenziwa kwi-pellets ngu iinkomo zondla ipellet.
Amanqaku omatshini wokuxheshisela iinkomo
1. Ukusebenza okuphezulu kunye nokukhutshelwa kwamandla asetyenzisiweyo: Ngokuyilwa kwayo okufanelekileyo kunye nobungcali, umatshini uyondla kwaye cinezela ngokulinganayo, kwaye ikhuphe iipellets ngomonakalo ophantsi
2. Iipellets azivelisayo zigudileyo kwaye, ubunzima obungcono.
3. Umatshini oshukumayo wepelletizer onemoto, akwenzi fume yeoyile okanye ungcoliseko.
4. Amandla anamandla kunye neziqithi ezomeleleyo ezomeleleyo, njengokuthi ukuba i-roller kwaye iyafa yenziwe yintsimbi ephezulu ye-alloy yensimbi.
5. Iintlobo ngeentlobo ze-pore yedayimitha iflethi kufa.
6. Olu matshini weenkomo zokutyisa iinkomo zepellet zinokuvelisa ukucinezelwa kwamasuntswana e-biomass anje nge sawutust, umququ, umququ kunye namanye amasuntswana.
Ipharamitha yobugcisa beCandelo leMilambo yokuTya kwePellet
Umthamo(kg / h)
Isantya(r / imiz)
Ubungakanani bomzimba (mm)
Ividiyo yeenkomo ezondla ipellet
Khetha ulwimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
Ilungelo lokushicilela © 2012-2020 Umatshini kaVictor Pellet. Onke amalungelo agciniwe.